Jaalliyadda Soomaaliyeed Ee Minnesota Oo Billad Sharaf Gudoonsiiyey Wasiirkii Hore Ee Gaashaandhigga “DAAWO SAWIRRADA’ – idalenews.com
Jaalliyadda Soomaaliyeed Ee Minnesota Oo Billad Sharaf Gudoonsiiyey Wasiirkii Hore Ee Gaashaandhigga “DAAWO SAWIRRADA’
Jaalliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa billad sharaf gudoonsiiyey Wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Soomaaliya hadana ah Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Xuseen Carab Ciise.
Xafladda billad sharafta lagu gudoonsiiyey Wasiirkii hore ee Difaaca oo ka dhacday magaalada Minneapolis ayaa waxaa kasooqeybgalay aqoonyahanno,saraakiil horey uga tirsanaa Ciidammada Xoogga Dalka Soomaaliyeed,haween,dhalinyarro iyo qeybaha kala duwan ee Jaalliyadda.
General Maxamed Cismaan Qaadi oo isagu ka mid ahaa saraakiisha Ciidammada Xoogga Dalka Soomaaliyeed oo billad sharaftan wasiirkii hore ee Gaashaandhigga gudoonsiiyey ayaa hadal uu ka jeediyey Munaasabadda waxa uu ka sheegay in Soomaaliya ay maanta gashay isbedel cusub islamarkaana ay dhabaha saartay wadadii hormarka iyo nabadda waxaana uu General Qaadi ku tilmaamay billaddan iney tahay mid mahad celin ah.
Wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Soomaaliya Dowladdii KMGka aheyd Mudane Xuseen Carab Ciise oo Munaasabadda lagu soo dhaweeyey islamarkaana billad sharafta lagu gudoonsiiyey ka hadlay ayaa u mahad celiyey soomaalida ku dhaqan Minneapolis waxaana uu ka sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa ee laga maray in Al-Shabaab in dalka laga xoreeyo.
“Aad ayaan idin kaga mahadcelinayaa abaal-marintiina, taasina waxaa ay daliil u tahay sida aad u garab taagan tihiin dowladdiina iyo madaxdiina intaba,waxaan sidoo kale runtii aad ugu faraxsanahay inaad I dareensiisaan inaan ahay muwaadin gutay shaqadii iyo waajibaadkii aad ii idmateen,kaligeyna guul ma gaari laheyn hadii aysan Saraakiisha iyo Ciidammada Xoogga Dalka Soomaaliyeed I garab istaagi laheyn”ayuu yiri Xildhibaan Xuseen Carab Ciise.
Ugu dambeyn Wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Mudane Xuseen Carab Ciise ayaa xusay inuusan iloobi doonin wadashaqeyntii hagar la’aaneed ee ay la yeesheen Saraakiisha Ciidammada Xoogga Dalka waxaana uu ugu hambalyeeyey Ciidammada Qalabka Sida guud ahaan sida ay ugu taaganyihiin iney dalkooda,dadkooda iyo diintooda cadawga ka difaacaan.sidoo kalena waxa uu qurba joogta ugu baaqay iney dalkooda dib ugu laabtaan islamarkaana ay maskaxdooda ku celiyaan.